Imaaraadka Carabta oo la sheegay in $3B ku bixiyay af-gambigii dalka Turkiga | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Imaaraadka Carabta oo la sheegay in $3B ku bixiyay af-gambigii dalka Turkiga
Imaaraadka Carabta oo la sheegay in $3B ku bixiyay af-gambigii dalka Turkiga
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Dowladda Isutagga Imaaraadka Carabta ay $3 Billion oo doolarka Maraykanka ah ay Ku bixisay in la af-gambiyo Dowladda sida dimuqraadiga ah loo doortay ee dalka Turkiga ee uu hogaamiyo Raccep Tayyip Erdogan.
Wargayska Daily Sabbah oo kasoo baxa dalka Turkiga oo soo xiganaya ilo Kala duwan ayaa qoray in Dowladda Imaaraadka Carabta (UAE) ay 3$ Billion oo dollar ay Ku bixisay afgambigii dhicsoobay ee dalka Turkiga ka dhacay 15 kii bishii Julay ee 2016 kii.
Qoraa u dhashay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Mehmet Acet, ayaa sheegay in wasiirka Arrimaha Dibadda dalka Turkiga Mevlüt Çavuşoğlu, uu yiri ” Dal Muslim ah ayaa 3$B Ku bixiyay burburka dalka Turkiga “.
Wasiirka inkastoo inkastoo uusan Ku dhawaaqin magaca Imaaraadka hadda waxaa baaritaan lasameeyay lagu cadeeyay in dalkaasi uu yahay Imaaraadka Carabta.
” Waan garanaynaa dalka dhaqaale Ku bixiyay afgambigii 15 July, kaaga daran dalkaasi waa dal Muslim ah ayuu sheegay Mevlüt Çavuşoğlu wasiirka Arrimaha Dibadda dalka Turkiga.
Wararku waxa ay sheegayaan in milkiilaha television -ka AlGHAD Maxamed Dahlan uu lacagtaasi u xawilay ururka loo haysto afgambigii Turkiga ee hogaamiyo Fatxulah Gullan, kaasi oo xaruntiisu tahay Magaalada Philadelphia ee dalka Maraykanka.
Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in lacagtaasi markii hore ay keeneen Soomaaliya ka dibna ay usii qaadeen dalka Masar.
Afgambigga dhicsoobay ee dalkaasi Turkiga ayaa waxaa Ku geeriyooday in ka badan 200 oo qof.
Previous articleRW ku xigeenka oo la wareegay sharciga la dagaalanka Musuqmaasuqa
Next articleMaxaa ka jira in 72 sacadood loo qabtay in Soomaaliya uu kaga baxo wakiilka Hay’adda FAO